अब निगमले जहाज पूर्ण क्षमतामा उडाउने – Medianp
अब निगमले जहाज पूर्ण क्षमतामा उडाउने
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, माघ २९, २०७५१६:३९0
काठमाडौँ, २९ माघ । नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमा रहेका सबै जहाजलाई पूर्ण क्षमतासाथ सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । विमान चालक ९पाइलट० को अभाव र मर्मतका लागि ग्राउण्डेड भएका जहाजलाई साता दिनदेखि एक महीनाभित्र सबै जहाज चलाउने तयारी भइरहेको निगमले जनाएको हो ।
मुकेश अम्बानी छोराको विवाहको पहिलो कार्ड कसलाई दिइयो ? कहाँ र कहिले हुदैछ विवाह ?
सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेपछि भर्ना रोकियो
धादिङवेंशीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदैै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटना, एकको मृत्यु
ट्रेड युनियन सभापतिमा विक